Ne2020 yakanyanya kuitwa uye yakasviba, runyerekupe nezve ramangwana zvirongwa zveSamsoni nhare-up inoenderera. Takambonzwa kuti iyo Galaxy S inogona kuwana gadziriso kutanga kwa2021, asi runyerekupe rutsva runoratidza kuti iyo yekutanga Galaxy Z Fold 3 inogona kuvhura muna Chikumi 2021.
Yapfuura Fold mamodheru akaona misi yakavhenganiswa yekutangisa. The chepakutanga yakavhurwa kuMobile World Congress 2019 muna Kukadzi, asi mushure mekuchinja hakuna kunyatso kuuya kumusika kusvika matsutso 2019. Iyo Galaxy Z Peta 2 yakaziviswa muna Nyamavhuvhu 2020 ichienda kutengeswa munguva pfupi inotevera.
Zuva raChikumi, rakakurudzirwa naAjou Nhau, rinogona kurira kure kutorwa - asi Mobile World Congress 2021 yakarongerwa kutanga musi wa 28 Chikumi 2021, uchinge wadzoserwa kumashure mukati megore. Izvo zvaizopa Samsung mukana wekuzivisa chishandiso chayo chitsva nekuchiratidzira pachiitiko chepasirose chepasi rose - tichifungidzira kufambira mberi kwadzoserwa kune zvakajairwa, hongu.
Kuenderera mberi kubva panguva, pane zano rekuti iyo nyowani Fold inogona kutsigira iyo S Pen. Izvi zvakambotaurwa nerunyerekupe, zvichimhanyisa kusvika kuvhurwa kweFold 2, asi zvakagamuchirwa zvakanyanya kuti kupeta kunoratidzwa yaisazogamuchira mhando dzedzvinyiriro kuti iyo S Pen inogona kushanda pachiratidziro.
Izvi zvinogona kuratidza kuti kufambira mberi kwakakura kwaifanira kunge kwakaitwa kusimbisa pamusoro pechiratidzo chinoshanduka chinoshandiswa pamidziyo yekupeta yeSamsung. Zvinokurudzirwa kuti wechipiri-gen UTG - girazi rakatetepa - rinogona kuendesa iyo S Pen ruzivo nepo ichibvumira kupeta chiitiko kunodiwa.
Uyezve, zvinokurudzirwa kuti iyo ramangwana Galaxy S21 ichashandawo neS Pen, izvo zvinogona kureva kuti iyo Mhuri mhuri yezvigadzirwa yaona kuvhurwa kwayo kwekupedzisira. Sezvazviri, pane musiyano mudiki pakati peGlass S nemidziyo yeGlass Note, nehunyanzvi, saka ndiyo chete S Pen ndiyo inosarudzira mhuri mbiri idzi.
Kunyangwe isu tichaona iri pasi pekuratidzira kamera inoramba ichionekwa. Kwayakabva inoratidza kuti Samsung inoda kushandisa hunyanzvi hweramangwana, asi inoenderera ichiti ndiko kuderera mukuenzana kwemifananidzo kunouya semhedzisiro, saka hakuzoverengerwa muGalaxy Z Fold 3.
Pane zvishoma zvekutsigira izvi zvirevo, asi isu tichiri kutanga kwerunyerekupe rwezvigadzirwa zve2021, saka isu tinotarisira kuti pikicha ijekeswe mumwedzi inotevera.
Samsung Galaxy Fold wongororo: Kutungamira kwounyanzvi kana zvakanyanyisa kukanganisa?
Samsung Galaxy Fold 2: Zvatinoda kuona mune inotevera Samsung inopetwa